ချစ်သူသက်တမ်းရှစ်နှစ်မြောက်နေ့မှာ ကောင်းပြည့်ကိုအမှတ်တရလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ် – Burmese.asia
Homepage / Celebrity / ချစ်သူသက်တမ်းရှစ်နှစ်မြောက်နေ့မှာ ကောင်းပြည့်ကိုအမှတ်တရလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ်
ချစ်သူသက်တမ်းရှစ်နှစ်မြောက်နေ့မှာ ကောင်းပြည့်ကိုအမှတ်တရလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ်
By Kyaw Htet AungPosted on March 2, 2020
သန္တာဗိုလ်နဲ့ကောင်းပြည့်ကိုတော့ လိုက်ဖက်ညီလှတဲ့စုံတွဲလေးအဖြစ် ပရိသတ်တွေကချစ်ခင်ကြသလို စံပြအနုပညာရှင်စုံတွဲလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြည့်ဟာ မော်ဒယ်လ်၊သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့အနုပညာလောကကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သလို သန္တာဗိုလ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးဟာနားလည်မှုရှိရှိနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သူတွေအဖြစ်လက်တွဲလာခဲ့ကြတာပါ။ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ စုံတွဲလေးကတော့ ဒီနေ့မှာ ချစ်သူသက်တမ်း(၈)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနေ့မှာ သန္တာဗိုလ်ကတော့ ချစ်သူကောင်းပြည့်ကို အမှတ်တရလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သန္တာဗိုလ်ကတော့ “????? 8 ????? ??????????? ??? ?? 2013 ကဆိုခဲ့တဲ့ ကိုယ့်သီချင်းနဲ့ကိုယ်အမှတ်တရ လုပ်ပလိုက်တယ်” ဆိုပြီးတော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု လုပ်ပြီးတော့ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ အမှတ်တရနေ့လေးမှာ ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးနေကြပြန်ပါပြီ။ဒီချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်ပွဲသတင်းကို စောင့်မျှော်နေကြပြီလား ပရိသတ်ကြီးရေ။
Previous post မအောင်မြင်ခင်က ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး ဆံပင်ညှပ်ဆရာအဖြစ် ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နေဆန်း
Next post မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝူဟန်သို့ ဆန်တန်ချိန် ၂၀၀ ပေးပို့လှူ ဒါန်း